6 nin oo burcad badeednimo looga qabtey Puntland oo lagu maxkamadeynayo France – SBC
6 nin oo burcad badeednimo looga qabtey Puntland oo lagu maxkamadeynayo France
Posted by editor on May 22, 2012 Comments
Lix nin oo Soomaali ah oo lagu qabtey hawlgal ciidamada cirka Faransiisku ka geysteen xeebaha gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta maxkamad lagu soo taagayaa magaalada Paris ee caasimada wadanka Faransiiska.
Hawlgalkan raggan lagu qabtey oo ay ka qayb qaateen diyaaradaha khumaatiga u kaca (Helicopters) ee Faransiiska ayaa ka dhacay duleedka degmada Garacad ee gobolka Mudug, waxaana hawlgalkan la fuliyey markii ragan lagu eedeeyey burcad badeednimada la siiyey laba milyan oo oo doolar oo madax ah ayna siidaayeen Dooni nooca dalxiiska ah oo laga leeyahay Faransiiska oo ay saarnaayeen 30 qof.
Doonida afduubka lagula kacay oo lagu magacaabo Le Ponant ayaa laga qafaashay xeebaha gacan biyoodka Cadan 30-kii bishii March sanadkii 2008-dii, waxaana doonidaasi u socotey jasiirada Seychelles ee ku taal badweynta Hindiya.
Afduubkaasi markii uu dhacay ayaa shirkada Maraakiibta ee doonidaasi iska leh ee lagu magacaabo CMA-CGM waxay bixiyeen $ 2.15 milyan (Laba milyan boqol iyo konton kun) doolarka Mareykanka, balse markii lacagtaasi ay qaateen afduubayaasha ayna fasaxeen doonidii ayaa waxaa hawlgal la sii qorsheeyey fuliyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan Kumaandooska Faransiiska kuwaasi oo dusha sare uga soo daatey baabuur ay wateen lixda Nin ee la maxkamadeynayo haatan.
Maxkamada la saarayo lixdan Nin ee afduubka loo haysto hadii maxkamadu ku hesho damnigan ku slaeysan afduubka iyo xatooyada waxay mudan karaan xabsi daa’in ama madaxaa ha ku furto, waxaana da’doou u dhaxaysaa 25 sano jir ilaa 50 sano jir.
Hal nin oo ka mid ah lixdan Nin ayaa qirtey in uu ku lug lahaa falka afduubka, laba ka mid ah waxay sheegeen inay doonida intii la haystey dusheekada fuuleen oo ay ka iibinayey Burcad badeeda Khaad, Sigaar iyo xoolo hilib ahaan ay qasheen balse aanay qayb ka aheyn afduubka, halka sadexda kale ay sheegene inaanay doonidaasi oogadeeda tagin ama aanay lug ku laheyn afduubkaasi.
Hawlgalka ciidamada Faransiiska ku qabteen lxidan Nin waxay ka haleen baabuurkii ay wateen lacag doolar ah oo gaaraysa 2 boqol oo kun & qoryo fudud.
La haystayaashii lagu qafaashey doonidaasi oo la tusay raggan hawlgalka lagu qabtey waxay qireen in nimankan ay ahaayeen kuwii afduubka u haystey, balse qaar ka mid ah la haystayaasha ayaa shaki ka muujiyey in lixdan Nin ay yihiin burcad badeedii haysatey.
Dalka Faransiiska waxaa xiligan lagu hayaa 22 qof oo Soomaali ah kuwaasi oo loo haysto falal ku saleysan burcad badeednimo oo afar xili oo kala duwan dhacay.
Sanadkii la soo dhaafay maxkamada ku taal magaalada Paris ayaa xukun xabsi oo u dhaxeeya shan ilaa sideed sano waxya ku ridey shan nin oo lagu eedeeyey inay yihiin burcad badeed kuwaasi oo qayb ka ahaa 6 nin bishii September ee sanadkii 2008-dii laga qabtey gacanka Cadmeed, ninka kale ilaa iyo hada wax dambi ah waa lagu la’yahay, inkastoo dacwad ku oogayaashu ay racfaan ka qaateen dambi la’aantaasi.
Sxbyaaal hadaad majeerteen tihiin faroole ayaa idin maqan waayo waxa uu ku mashquulsan yahay kuwo ku xiran india ee sabura